ढोरपाटनमा ४९ जनाको एन्टिजेन्ट परीक्षण थप ६ जनामा कोरोना पुष्टि - ढोरपाटन पोष्ट
ढोरपाटनमा ४९ जनाको एन्टिजेन्ट परीक्षण थप ६ जनामा कोरोना पुष्टि
२०७८ जेष्ठ १४, शुक्रबार ०७:००
ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नं. ३ पुर्कोटमा विहिबार ४९ जनाको एन्टिजेन्ट परीक्षण गरिएको छ ।
उनीहरु मध्ये ६ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । पुर्कोट देउरालीका एक व्यक्ति संक्रमण भई घरमा आए तर आफू संक्रमित भएको परिवारलाई समेत थाहा दिएनन् ।
केही समयपछि उनकी श्रीमतिमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि स्थानीय क्रसित बनेका थिए । लगातार कोरोना परीक्षण गर्ने माग आएपछि, स्वास्थ्य केन्द्रको सहयोगमा एन्टिजेन्ट परीक्षण गरिएको वडा अध्यक्ष हेमेन्द्र घर्तिले बताउनुभयो ।
‘ परीक्षण पछि, ६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको हुँदा होम आइसोलेसनमा सुरक्षित रहन भनिएको छ ।’ वडा अध्यक्षघर्तिले बताउनुभयो ।
ढोरपाटन नगरपालिकामा विहिबारमाध २ जना स्वास्थ्यकर्मी सहित थप २२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । नगरपालिकाले गत जेठ ७ गते वडा नं. ५ को अधिकारीचौर स्वास्थ्यचौकीमा ५३ जनाको स्वाब संकलन गरेको थियो । जहाँ २२ जना संक्रमित भएका छन् ।
नगर स्वास्थ्य संयोजक घनश्याम शर्माका अनुसार, बैसाख ३० गते स्वास्थ्य केन्द्र बुर्तिबाङमा स्वाब संकलन गरिएका ४३ जना मध्ये २५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
बोबाङमा २३ जनाको स्वाब संकलन गरिएकोमा १ जना स्वास्थ्यकर्मी सहित २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उता वडा नं. ४ को खुँगा स्वास्थ्य चौकीमा ३१ जनाको स्वाब लिइएकोमा, ५ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
जेठ ६ गते, स्वास्थ्य केन्द बुर्तिबाङमा थप ३६ जनाको स्वाब लिइएकोमा ३ जना स्वास्थ्यकर्मी सहित १८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
नगरपालिकाले नगरका विभिन्न स्थानमा १ सय ८६ जनाको स्वाब लिएको र ४९ जनाको एन्टिजेन्ट विधिबाट कोरोना परीक्षण गरेको छ । जस मध्ये ७८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
तमानखोलाको होमआइसोलेसनमा स्वास्थ्यकर्मी
प्रतिगामी कार्य विरुद्ध काँग्रेस भातृ तथा सुभेच्छुक संस्थाको संयुक्त विज्ञप्ति